Ogaden News Agency (ONA) – Dareenka aan Kala soo Noqday Dhagaysigii Baarlamaanka Yurub – Cabdiraxmaan Sheekh
Dareenka aan Kala soo Noqday Dhagaysigii Baarlamaanka Yurub – Cabdiraxmaan Sheekh
Posted by ONA Admin	/ February 22, 2015
Socdaalkii aanu ku tagney xarunta barlamaanka yurub ee Brussels Arbacadii 04.02 2015 wuxuu ahaa mid aad uga duwan socdaaladii hore, wuxuuna calaamad gooni ah ku lahaa socdaalkaas ama ka qayb-galka shirka Dhagaysiga Tacadiyada iyo Gabood falka ka jira Ogadenia ay maalin walba geystaan maamul ku sheega argagixisada ah ey hogaanka ka tahey TPLF / EPRDF, in markii ugu horeysey wafiuuda shirka ama dhageysiga ka soo qayb-gashey ay ka mid ahaayeen xubno si rasmi ah loogu marti qaadey oo ka socdey Ogaden National Liberation Front (ONLF).
Wafdiga ONLF ayaa si buuxda makrofonka loogaga dhawaaqey lana yidhi eegga waxaanu hadalka siineynaa xubinka matalaya (onlf) halkaasna uu mudane badal ka soo jeediyey khudbad aad u soo jiidatey dadkii shirka fadhiyey ee isugu jirey European-ka iyo wufuudihii kala duwanaa ee shirka joogey. Waxaa meesha madasha shirka ka hadley madax gaadheysey ilaa 11-qof oo kala matalayey Barlamaanka Yurub, jaaliyadaha Ogadenia iyo hayadu kala duwan oo ajnabi ah, kuwaas oo dhamaan tooshka ku ifiyey ama hadalkooda diirada ku saarey sida wax shinimada ah ee taliska Wayaanaha maalin walba u gumaado shacbiga Ogadenia.
Waxaa iyadana xusid mudan in Baarlamaanka Yurub ey ka muuqatay inay si fiican u naceen maamul ku sheega Wayaanaha ee ka arimiya Addis Abeba iyaga waxaana ka mid ahaa hadaladooda; “Waan nacnay xukuumadda ka talisa Itobiya, waana in aan talaabo ka qaadna inta ka horeysa 15ka May. Idinna, hadaad tihiin mucaaradka Itobiya waa inaad u midowdaan sidaad talaabo wax ku-ool ah uga qaadi lahaydeen xukuumadda wayaanaha inta ka horeysa May 15.” Waxaa kale oy sheegeen Barlamaanka Yurub ineysan u direyn goob-joogayaal doorashada Wayaanaha ee ka dhici doonta Addis Abeba isla markaana aysan wax doorasho ah ku tilmaameynin natiijada ka soo baxda doorasho ku sheegtaas oy u arkaan waxaan xalaal aheyn.
Arimahaas ka soo yeedhaya reer-Yurub waxey ku tusayaan in ay kala fogaadeen Yurub iyo taliska EPRDF ee Addis Ababa jooga, iyadoo meeshaas badalkeedii ONLF si qiimeyn iyo qadarin leh codka khudbada loo siiyey fikirkii ONLF-na la dhageystey.
Arimahaas oo dhan markaaD isku soo duuduubno, waxey ku tuseysaa in ay maanta Yurub rabaan mucaarad Itoobiya oo isku duuban oo lagu caawiyo qaabkii loo ridi lahaa xukunka EPRDF, sidaa awgeed ayey waajib ku tahey dadyawga faraha badan ee ku hoos dulman taliska wayaanaha iney keenaan fikir loogu mideysan yahey tuurida taliska Wayaanaha, kadibna shucuubta ku hoos nool waxa loogu yeedho Itoobiya ay hadhow miis dushiis wax ku qaybsadaan iyadoo midkii raba aayo ka tashi wuxuu rabo loo yeelayo. Inta taas ka horeysana wax kasta si cadaalad ah miiska loogu
Guul iyo Bobonimo.